बदला लिन कस्सिएको बछेडो ! | Ratopati
बदला लिन कस्सिएको बछेडो !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १२, २०७६ chat_bubble_outline0
सडक किनारको चउरमा एउटी घोडी चरिरहेकी थिई । अलि पर अग्ब्लो पाललो खुट्टाको एउटा बछेडो उफ्रदै दगुर्दै खेल्दै चरिरहेको थियो ।
सडकमा सडकै चिर्लान् कि जस्ता बडेमानका बस ट्रक एकपछि अर्को बतासिँदै हुइँकिरहेका थिए । पछि पछि भटभटे मोटरसाइकिलहरु त्यत्तिकै बतास्सिदै उछिन पाछिनमा हुइँकिरहेका थिए । कति त उछिनेर अगाडि पुग्थे । सडक किनारमा साइकिल सवारहरु भने बडो होसियारीका साथ अगाडि बढिरहेका थिए ।
घोडी सडकको यो गर्जनबाट बेखवरजस्तै देखिन्थी । उसका अगाडिका खुट्टा डोरीले बाँधेर आपसमा अल्झाइएका थिए । टाढा नजाओस् भनेर यस्तो गरिएको थियो । घोडी घाँसको एउटा गाँजबाट अर्को गाँजसम्म बुरुक्क उफ्रँदै पुग्थी र नरम नरम छानेर चर्थी । आँगमा, फिलामा बसेर टोकिरहेका झिङ्ंगा भगाउन बेला बेला पुच्छर चलाउँथी । एक महिना अघि मात्र जन्मेको उसको बछेडो गडगडाउँदै कराउँदै बतास्सिइरहेका गाडीहरुतिर रमाइलो अचम्म मानेर हेरिरहेको थियो । सोच्दै थियो बाफ रे कति ठूलो !? आश्चर्य ले मुख आँ पार्दै थियो । सेतो रङ्गको विशाल रेफ्र्रिजेरेटर ट्रकतिर आँखा पुग्यो । आमा हेर्नुस् त क्या गज्जब ! अहिले एकाएक सडकमा रङ्गी विरङ्गी फित्ताले सजाएको सुन्दर कार हेरिरहेको थियो । कारको बोनटमा एउटा चरा बसेको थियो । यसरी सजाइएको कारमा विहाका नयाँ दुलहा दुलही बस्छन् । कार देखेर बछेडो खित्का छोडेर हाँस्यो । “मम्मी हेर्नुस त कारको नाकमा चरा बसेको ! ”
आमा घोडीलाई मोटर गाडीहरु हेर्न मन पर्दैनथ्यो । यसैले आमा घोडी जानी बुझी कनै सडकतिर पिठयू फर्काएर चर्थी । यसरी घोडी यी मोटरहरुसँग उसको मित्रताको अनुभव छैन भन्ने देखाउन चाहान्थी । आमाघोडी र बछेडोका रुचिमा धेरै फरक थियो । बछेडोको नजरमा आकाश नीलो र निर्मल थियो । पानी चीसो र मीठो थियो । घाँस हरियो र स्वादिलो थियो । तर उसकी आमा घोडीलाई पानीको हरेक थोपामा डिटरजेन्टको गन्ध आउँथ्यो । हावामा पेट्रोल मोविल र डिजल ह्वास्स गनाउँथ्यो । चउरको घाँसमा थरीथरीका रासायनिक तत्त्वको स्वाद आउथ्यो । सडकका बारेमा त के कुरा गर्नु ? लगातारको घ्यार्घ्यार् र टाइँटाइँ सुनेर वाक्क दिक्क भएकी थिई । कारलाई त उ दुर्गन्ध भरिएको टिनको डब्बा ठान्थी ।
यसैले बछेडो आफ्नो अनुभव र भावनाका बारेमा एउटी बाच्छीलाई बताउन मन पराउँथ्यो । यो चन्चल चन्चल कैलो रङ्गकी बाच्छी आफ्नो बथानबाट भागेर यति टाढा यहाँ बछेडोसँगै चर्न आइपुग्थी । उसलाई फुर्तिलो र रमाइलो यस बछेडोसँग भेटेर गफसफ गदैृ चर्न रमाइलो लाग्थ्यो ।
यी दुई बालमित्रहरु आपसमा भेटेर विभिन्न कुरा गर्थे । नयाँ नयाँ कल्पना गर्थे ।
“त्यो चम्किलो ट्रकमा चढेर सररर गुड्न पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो होला हकि !? ” बछेडोले कल्पना गर्‍यो ।
“मलाई त डर लाग्छ !” बाच्छीले आँखा झिमझिम पार्दै भनी । “म त चढेँ भने पनि अडिन नसकेर तल खस्छु होला ” ।
“नडराऊ ! म तिमीलाई चपक्क समात्छु खस्न दिन्न नि । ” बछेडोले याल हल्लाउँदै बहादुरीको लबजमा भन्यो ।
“यसमा त म ढुक्कै छु नि ।” बाच्छीले पुनः आँखा झिम् झिम् पार्दै भनी , “तिमी कति बहादुर छौ भन्ने कुरा म अहिल्यै यसै क्षण दगुर्दै गएर आमालाई भन्छु ।”
कैली बाच्छी बुरक्क बुरुक्क उफ्रँदै नाच्दै आफ्नी आमा भएतिर दगुरी । बछेडो पनि आफ्नी आमातिर फटाफट दगुर्‍यो । आमानिर पुगेर उभियो र उत्सुकताका साथ सडकतिर हेर्न थाल्यो ।
“हेर्नुस् ! हेर्नु्स् !! ” अचानक एक –तमासले चिच्च्यायो , “त्यो रातो ट्रकमा सिँढी ! त्यो सिँढी कसको लागि हो आमा ? ”
“म जान्दिनँ । मलाइ जान्न मन पनि छैन ।” घोडीले त्यो अनौठो हेर्दै नहेरी भुत्भुताई ।
“आमा !” बछेडो फेरी चिच्चायो हेर्नुस् ! मैले त कहिल्यै यस्तो देखेको थिइनँ ।”
अग्लो जालीदार बार लाएको एउटा बडेमानको ट्रक सडकमा बिस्तारै गुड्दै थियो । ट्रकमा घोडाहरु राखिएका थिए । सबै घोडाले टाउको निहुराएका थिए । हेर्दै उदास देखिन्थे । तिनका आँखामा डर भरिएको देखिन्थ्यो । तिनको शिर निराशा र बिचरापनले झुकेजस्तो लाग्थ्यो ।
“शुभयात्रा !” बछेडोले घोडाहरुतिर हेर्दै भन्यो । खूब घुम ! मोज गर ! मैले पनि तिमीहरुले जस्तै घुम्न पाएको भए ? आहा क्या मजा हुन्थ्यो !”
एउटा बुढो घोडाले टाउको उठायो र हिनहिनायो । तर बछेडोले उसको कुरा बुझेन ।
“उसले शायद मेरो शुभकामनाको जवाफ दिएको होला !” बछेडोले मनमनै भन्यो । नाच्दै दगुर्दै आइरहेकी कैली बाच्छी देखेर बछेडो पनि त्यतै दगुर्‍यो र बाच्छीनिर पुग्यो ।
“ए साथी, तिमीले देख्यौ ? हाम्रा भाइ बन्धुहरु त ट्रकमा बसेर घुम्न गएका छन् नि !” स्याँ स्याँ फ्याँ फ्याँ गर्दै बछेडोले भन्यो “मैले शुभकामना दिएँ । तिनीहरु खुसी भएर हिनाहिनाए । मलाई धन्यवाद भनेका होलान् । ठूलो भएपछि म पनि त्यसैगरी घुम्न जान्छु !”
“मेरी आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यी घोडाहरु वधशालातिर जाँदैछन् । तिनीहरुलाई त्यहाँ लगेर मार्दैछन् ।” बाच्छीले सुइराजस्तै शब्दमा भयङ्कर कुरा भनी ।
“ए तिनीहरुलाई मार्न लगेका हुन् ” हैरान हुँदै बछेडोले भन्यो । यसपछि केही छिनसम्म उसका आँखामा अन्धकार छाएजस्तो भयो ।
“अँ ! मार्न लगेका हुन् !! आमा भन्नुहुन्थ्यो सबै घोडालाई उमेर पुगेपछि त्यसरी नै बधशाला लगेर मार्छन् मासुका लागि ”
“धत् ! नहुँदो कुरा जथाभावी बोल्छेस् कैली ? बछेडोले आँखा राता बनायो ।
“हो, मेरो मम्मी भन्नुहुन्छ, अव तिमीहरुजस्ता घोडाको कामै छैन । कसैले तिमीहरुलाई मन पराउँदैन । यसै भएर बधशालामा लान्छन्, काट्छन् । मेरी आमा त के भन्नुहुन्छ भने घोडाको काम अब कारले गर्छन् । मोटरले गर्छन् । बसले गर्छन् । ट्रकले गर्छन् । ट्रयाक्टरले पनि गर्छन् । अनि घोडाको के काम ? हामी त गाइ ! हामी मीठो पोसिलो दुध दिन्छौं । मानिसहरु हाम्रो दूध पिउँछन् । दूधबाटै दही, नौनी, पनीर, चीज कति कुरा बनाउँछन् । हाम्रो काम मोटर ट्रकले गर्न सक्दैन । विचार गर त ! तिमीहरुसँग समाजलाई दिने कुरा नै के छ ?”
साथी बाच्छीका कुरा सुनेर बछेडो ट्वाल्ल पर्‍यो ।
“यसै भएर मेरी मम्मी भन्नुहुन्छ तिमी जस्ता घोडातिर फर्केर पनि नहेर्नू । हेर्दै नहेर्नू ।” बाच्छीले फटाफट यति कुरा गरी र भर्खर उम्रँदैका सिंङले आकाशलाई जिस्काउँदै बाच्छी आफ्नो बथानतिर दगुरी ।
बाच्छीका कुराले बछेडोलाई गहिरो चोट पर्‍यो । आफू नराम्ररी अपमानित भएको ठान्यो । अलि सम्हालिएपछि बाच्छीलाई चोटिलो जवाफ दिने विचारले गीतमा चिच्च्यायो
झुट्टी, तेरो टाउकोमा झुठ
झुट्टा व्यवहार झुट्टै ठुस
देख्लिस् तँलाई मक्खीचुस
बाच्छीले उसतिर फर्केर पनि हेरिन । “झुट्टी, तेरो टाउकोमा झूठ ।” बछेडोले फेरी दोहोर्‍यायो । पटक पटक दाहोर्‍यायो । उसको शुद्ध, सहज र विश्वसनीय हृदयमा चोट परेको थियो । बछेडो दगुर्दै आफ्नी आमातिर पुग्यो । आफ्नो थुतुनु आमाको तात्तातो छातीमा टाँस्यो । उसलाइ थोरै भएपनि सान्त्वना चाहिएको थियो ।
“आमा आमा, घोडाको अब कामै केही छैन ? ट्रक ट्रयाक्टर मोटर सबैले हाम्रै काम गर्छन् हो ?” बछेडोले बिस्तारै सोध्यो ।
आमाले हाँस्दै “ए हैन हैन त्यस्तो हैन । जसले भन्यो त्यो पुरै झुट्टा हो ।” भन्लिन् भन्ने बछेडोले सोचेको थियो ।
तर घोडीले दिक्क हुँदै टाउको हल्लाएर भनी “हो बावु यो साँचो कुरा हो । ”
“ए त्यसो भए ती घोडाहरुलाई ट्रकले बधशालामै लगेको हो त ?”
“तिमीलाई कसले भन्यो ?” घोडीले सतर्क हुँदै सोधी ।
त्यही कैलीले भनेकी । उ त के पनि भन्थी भने मजस्ता घोडाको अब कुनै कामै छैन । अब उ पनि मसित नखेल्ने रे ” बछेडो घुँक्क घुँक्क गर्दै रुन लाग्यो ।
घोडीले लामा लामा तडीवाला आफ्नो छोरो बछेडोलाई माया ममता र करुणाले हेरी । ‘जीवनको यो कटु सत्य अचानक पोखिएछ । कलिलो कमलो हृदयमा यो खपिनसक्नुकै भार हो !’ घोडीले मनमनै सोची ।
साँझ अस्तबल फर्केपछि घोडीले आफ्नो छोरालाई घोडाका शानदार अतीतका सारा घटना कथाहरु सुनाई । उसले कहिल्यै नदेखेको नसुनेको अचम्म लाग्दा कथा सुनाई जुन कथाका नायक नायिका आफ्नै पराक्रमी पुर्खाहरु थिए ।
आमाका कुाराले बछेडाको मन अलिकति हलुका भयो । राति मजासँग सुत्यो । विहान ब्युँझँदा सधैँ जस्तै मन प्रसन्न थियो । उ उठेर मैदानतिर दगुर्‍यो । चक्कर लगायो ।आफ्नो किसिमले नाच्यो पनि । यसरी बछेडो त्यो अहङ्कारी बाच्छी नआउँदासम्म नाचिरह्यो । बाच्छीलाई नजिकै देख्नासाथ जर्किएर भन्यो, “ल, अव तिमी पनि सुन !” मेरो ममी भन्नु हुन्छ “घोडाको इतिहास बडो शानदार छ । त्यस्तो शानदार अतीत कुनै गाईको न कहिल्यै थियो न कहिल्यै हुने वालाछ । मेरो मम्मी के पनि भन्नुहुन्छ भने पुरानो जमानामा घोडाहरु ठूला ठूला लडाइँहरुमा भाग लिन्थे । बहादुरी साथ आफ्ना योद्धाहरुको संरक्षण गर्थे । बहादुरी देखाउँदा देखाउँदै कति घोडा शहीद पनि भए । घोडाहरुको नाम इतिहासमा अमर छ । हाम्रा पुर्खाहरु, आँधीको वेगमा उड्थे । टाढा टाढाबाट विजयका समाचार ल्याउँथे । मम्मी के पनि भन्नु हुन्छ भने शक्तिशाली राजघरानाहरुमा उपहारकै क्रममा पनि सबैभन्दा मूल्यवान् मानिन्थ्यो घोडा । घोडाभन्दा मूल्यवान् उपहार केही हुन्थेन । घोडाहरु शूरवीरहरुका लागि युद्धका आधार थिए, सवारीका शोभा थिए, अनि किसानका लागि होनहार मित्र थिए । खेतवारी जोत्न, सम्याउन, बाली ओसार्न मद्दत गर्थे । समाजमा घोडाहरुको ठूलो इज्जत थियो ।”
मम्मी भन्नु हुन्छ, “पहिले पहिले हाम्रो गलामा सुनको घण्टी झुण्ड्याइन्थ्यो । हाम्रो पिठ्यूँमा राख्ने साजसामान कडा, नरम र मूल्यवान् छालाको हुन्थ्यो । त्यसमा सूनका फूल पात लहरा कढाइ गरिएको हुन्थ्यो । यात्रामा र युद्धका मैदानहरुमा हामी घोडाहरु आफ्ना मानिसको डटेर साथ दिन्थ्यौँ, अभर पर्दा खटेर रक्षा गर्थ्यौं । यदाकदा जङ्गल हुँदोका सडकमा कतै हिंस्रक हुँडारका बथानले हाम्रो गाडीमा आक्रमण पनि गर्थ्यो। त्यस्तो वेला हाम्रा लामा लामा तडीका खुट्टामा अभूतपूर्व तागत आउँथ्यो । हामी वायुवेगले कुदेर हुँडारको पहुँचभन्दा टाढा पुग्थ्यौं । बच्थ्यौंऽ बचाउँथ्यौँ ।” मेरी ममीले अर्को एउटा चाखलाग्दो कुरा पनि भन्नुभएको छ—
वहाँ भन्नु हुन्छ— “दौडका हटठाकट्ठा फुर्तिला घोडाहरु आज पनि घोडे जात्रामा दगुरेर दुनियाँलाई छक्क पार्न सक्छन् । कुन कुन घोडाले दौड जित्छ त्यसमा दर्शक दुनियाँले प्रशंसाको ताली दिन्छ ।”
“अँ, यो पनि सुन ।” मम्मी भन्नु हुन्छ– “वाँ गर्दै कराउनु र घाँस खानु उग्राउनुबाहेक गाईले केही गतिलो काम गर्न सक्दैन । यति मात्र होइन, आफ्ना बाच्छा बाच्छीले चुस्नु पर्ने दूध तिनै बाच्छा बाच्छीलाई नदिएर अरुले दुहेर खाँदा पनि गाईले केही गर्न सक्दैन । तिमीहरुको पुरानो इतिहास बडो गन्जागोल छ । खै तिमीहरुका अतीतको कुनै उत्साजनक उदाहरण छैन । अहिल्यै पनि समाजमा तिमीहरुको के इज्जत छ र ?”
एक छिन त वाच्छी अकमक्क नै परी । के भन्ने के भन्ने सोच्नै सकिन । एक छिनमा सम्हालिई । अनि कराई –“पख, अहिल्यै गएर म मेरी मम्मीलाई भन्छु,। मसँग तिमी यसरी हुँदोनहुँदो कुरा गर्ने ? गाई सुस्त र भूँडीवाल हुन्छन् । बाँ गर्ने र उग्राउने बाहेक कुनै गतिलो काम गर्न सक्दैनन् । भन्या हैन तिमीले ? मेरी मम्मीले गोरुबाबासँग यो सबै भनिदिन्छिन् अनि बाबाका तीखा सिङले तिमीलाई स्वाद चखाइदिन्छ । यदि तिक्खर स्वाद कि तिमी जीवन भर कहिल्यै बिर्सने छैनौ ।”
“कुरौटे कहीँकी !” बछडाले तिरस्कार भावका साथ भन्यो ।
कैली बाच्छीले एक छिन बुद्धि खेलाई र भनी, “तिमी के के न भनें भन्छौ । आफ्नो इतिहासको धाक नलाऊ बुझ्यौ ? गर्छौ भने हिजोआजको कुरा गर न । हिजोआज तिमीहरुको काम सवै मेसिनले गर्छ । कार, बस, ट्रक, ट्रयाक्टरले गर्छ तिमीहरुको काम । घोडाहरु लडाईंका मैदानमा डटेर बहादुरी देखाउन सक्छन् भने तिमी ट्रक र ट्रयाक्टरका अगाडि पर्न किन सक्दैनौ ? तिमी त ट्रक ट्रयाक्टर देखेर डराउँछौ । मुकाबिला गर्न सक्दैनौ । हो कि होइन ?”
यस पटक बछेडोले केही भन्न सकेन । दिक्क हुँदै जमीनमा खुट्टा बजार्‍यो र पुच्छर फट्फटायो ।
कैली बाच्छी पनि फनक्क घुमी र दबेको चालले आफ्नी आमाभएतिर गई । कैलीको व्यङ्ग्यपूर्ण भनाइहरु बछेडाका मनमा तीखा काँडा बनेर बिझिरहेका थिए । ‘उ तत्काल कस्सिएर कैलीसित झगडा गर्न सक्थ्यो । रिसाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । कैलीका कुरामा पनि आंशिक सत्य त थियो नै । आखिर घोडाहरुले आजसम्म यी ज्यानमारा मसिनहरुको विरोध कि नगरेका ? मसिनका विरुद्ध घोडाहरुले एक पटक पनि आवाज घन्काउन सकेका छैनन् । उसकी मम्मी सडकमा हुइँकिने कार बस ट्रकतिर आँखा उठाएर हेर्न पनि चाहँदिनन् । अर्कोतिर मुख फर्काएर चर्छिन् । यो त ठिकै हो । तर मोटर कार ट्रक बसहरुलाई उनको यो पीठफर्काइबाट के फरक पर्छ र ? यसबाट केही फरक पर्दैन ।’
बछेडोको मन तड्प्यो । उसलाइ लाग्यो घोडाहरुको कुलीनता र प्रतिष्ठाका लागि केही गर्न नसक्नुमा उ पनि जिम्मेवार छ । उसले यसपटक कैलीका व्यङ्ग्यपूर्ण भनाइहरु आमालाई पनि भनेन । उसलाई लाग्यो, ‘कुरा त कैलीका पनि सबै गलत होइनन् । हामी घोडाहरु हुतिहारा भएकै हो । जीवनमा आवश्यकता पर्दा हरेकले आफ्नो फैसला आफै गर्न सक्नुपर्छ । अरुलाई पर्खने हैन ।’ चरनमा उभिएर उ अब सडकमा हुइँकिइरहेका गाडीहरुलाई अर्कै नजरले हेर्न थाल्यो । उ गहिरो सोचमा डुब्यो । उसको कलिलो बुद्धिमा एउटा विचार उम्ल्यो । उ तुरुन्तै उफ्रे्रेर पक्की सडकतिर दगुर्‍यो ।
“कहाँ जाँदै छौ ?” आमाघोडीले चेतावनी दिँदै भनिन् । “त्यता नजाऊ ! खतरा छ फर्क । अस्तबल फर्क । ”
तर बछेडोले सुनेन । उसले बुरुक्क उफ्रे्रेर खाडल पार गर्‍यो । सडकमा पुग्यो । सडक किनारमा उभिएर सडकमा भागदौड गरिरहेका गाडीहरु हेर्न लाग्यो । मानौ उ कसैको प्रतीक्षामा छ । धेरै बेरसम्म प्रतीक्षा गर्दै उभियो । त्यसै बेला उसले अलिपर सडमा मोटरहरुको सरदारजस्तो बडेमानको मोटर चाँदी रङ्गे रेफ्रिजेरेटर ट्रक देख्यो । धेरै ठूलो थियो त्यो ट्रक । जब ट्रक उसको नजिकै आइपुग्यो बछेडो बुरुक्क उफ्रेर बीच सडकमा पुग्यो र बाटो रोकेर ट्रकका अगाडि ठिङ्ग उभियो । उसका लामा तडीका पातला खुट्टा फट्टिएका थिए । छाती तन्केको थियो । आँखा क्रोधले तम्तमाउँदा देखिन्थे । उ साँच्चै चुनौतिको मुद्रामा थियो ।
ट्रक डाइभरले देख्यो ‘एउटा बछेडो ट्रकको बाटोमा उभिएको छ । उभिएको मात्र छैन हमला गर्ने ताकमा उभिएको छ । हमला गर्नै लागेको छ !’ डाइभर हडबडायो । उसले जोरसित ब्रेक लगायो र छिटोछिटो स्टेयरिङ घुमाउन थाल्यो । तर अनायास चिप्लेर गाडी खाडलतिर गयो । घडडड घडयाम्म आवाज गर्दै पल्टियो ।
ट्रकका बडे बडे पाङ्ग्रा केही बेरसम्म घुमि नै रहे । जब पाङ्ग्रा घुम्न छाडे सडकमा सन्नाटा छायो । अलि पर आमा घोडी ढुङ्गाजस्तै निश्वल उभिएकी थिई । गाइको बथानले घाँस चर्न छोडे । बडेमानको गोरु पनि आँखा तानी तानीकन त्यो उत्तानटाँग ट्रकलाई हेर्न थाल्यो । जो भयानक सुनामीले उखेलेर फ्याँकेको अजीव जीव जस्तो देखिइरहेको थियो ।
बछेडो त्यहीँ उभिइरह्यो । उसका चारै खुट्टा टाढाटाढा फैलिएर दह्रोसित टेकि रहेका थिए । तर यी खुट्टा अहिले घोडाको पुच्छर जस्तै थर्थर काँपिरहेका थिए । उसले हैरानीसाथ आँखा झिम्म गर्‍यो। उसलाई यति ठूलो हङ्गामा उसैले खडा गरेको भन्नेमा विश्वास भइरहेको थिएन । अरु मोटर गाडीहरु उल्टेको ट्रक नजिकै आएर नरोकिएका भए उ अझै कतिबेर त्यहाँ त्यसरी नै उभिइरहन्थ्यो ।
अचानक उसलाई लाग्यो अव म यहाबाट हट्नुमै कल्याण छ । उ फरक्क फर्किएर चरन चउरतिर दगुर्यो । आफ्नी आमासित टाँस्सिएर उभियो ।
आमाघोडी र बछेडोले देखे, मानिसहरुले बडो मुस्किलसँग ड्राइभरको क्याविन खोले । ड्राइभरलाई घिसार्दै बाहिर निकाले । बाफ्रे बाफ् डाइभर त रिसले चूर थियो । पर चरनसम्म पनि उसको क्रोध गर्जन गुन्जिन पुगेको थियो । उ तमाम घोडालाई गाली दिदै थियो । घोडा घोडी बछेडो सबलाई गाली दिँदै थियो ।
ड्राइभरले उठेर चारैतिर आँखा घुमायो । उसले अपराधी ठानेको बछेडोलाई देख्यो । देख्नासाथ मोटो डण्डा उठायो र चउरतिर दगुर्‍यो ।
“भाग, भाग, छिटो भाग !” आमा घोडीले बछेडोलाई भनी र थुतुनोले घँचेटी । बछेडो ज्यान जोगाउन भाग्यो ।
ड्राइभरले परसम्म त पिछा गर्‍यो। हावासितै बत्तिएर पैयाँ छेड्ने बछेडालाई भेट्टाउनु उसको बुताबर्गतको सक्ने कुरा थिएन । गाली बर्बराउदै फक्र्यो । छिट्टै एउटा कारमा बसेर नजिकैको गाउँतिर लाग्यो । त्यहाँबाट सहायताका लागि कतै फोन गर्नु थियो ।
झण्डै टाउकोमा बर्सन लागेको डण्डाको खतरा टर्‍यो । बछेडो दगुर्दै गाइको बथानमा पुग्यो । गाइ र गोरुहरु घाँस चर्दै भर्खरको सडक दुर्घटनामाथि बहस गर्दै थिए । तर कैली बाच्छी तुल्बुलाएकी थिई । उ बछेडोको प्रतीक्षामा थिई । बछेडोलाई देख्नासाथ त्यतै दगुरी ।
“मम्मी भन्नुहुन्छ .............”
बछेडोले उसका कुरा सुन्यानसुन्यै गर्‍यो । उ दण्डित हुनबाट बचेको थियो । उसका थर्थराएका खुट्टा अब स्थिर भएका थिए । आज उसलाई आफूमाथि गर्व थियो ।
“मम्मी भन्नुहुन्छ .............” कैली बाच्छीले भनी तिमीले यो मुर्खता गर्‍यौ । आज कि तिमी मर्थ्यौ त ड्राइभर मर्थ्यौ । ड्राइभर मरेको भए ”............. एकछिन् चूप लागेर कैलीले भनी “तर मेरो विचारमा तिमी संसारमा सबैभन्दा पराक्रमी बछेडा हौ ।”
बछेडो चुप रह्यो । केही बोलेन । उ टाढा टाढा कतै आँखा गाडेर हेरिरहेको थियो । अतीतको एउटा भव्य चित्र ! युद्ध भूमिमा सिधै दगुर्दैको एक चुस्त घोडा आफ्नो पिठयुँमा एक घाइते योद्धालाई बोकेर दगुरेको छ । उसले देख्यो तीन घोडाबाला वग्गी गुडेर आउँदै छ । हुँडारको बथान त्यसको पिछा गरिरहेको छ । उसले के पनि देख्यो भने रातको बेला छ । घोडाहरु चरनमा चरिरहेका छन् । अर्कोदिन गर्नुपर्ने कठोर मेहनतका लागि तैयार हुँदैछन् । उसले घोडादौड अर्थात् घोडेजात्राको मैदान देख्यो । फुर्तिला घेडाहरुको दौड देख्यो । उसले एक किसानमैत्री घोडाले अजङ्गको हलो तानेर किसानको खेत जोतिरहको पनि देख्यो । उसलाई लाग्यो उ आज घोडाहरुको गौरवशाली अतीतलाई आँखा अगाडि झल्झली देखिरहेको छ ।
साभारः छतपर फँसगया बिल्ला और तीन कहानियाँ, अनुराग ट्रष्ट ।
कश्यपको कथा : धूर्त सेठ
बालकथा : अहङ्कारको नतिजा
कश्यपको कथा : लोभले लाभ लाभले विलाप
कश्यपको कथा : ज्यान बचाउने गमला
कश्यपको कथा : अरुलाई दोष दिनु भनेको आफैँ दोषी हुनुको प्रमाण हो
बालकथा : प्रह्लादको न्याय, यसरी चिनियो असली आमा
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि गृहले थाल्यो परामर्श
तीन महिनाभित्र दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने उद्घोष
एमाले अधिवेशनमा धरहरासहित ओलीको प्रचार (फोटो/भिडियो)
न्यायालयको मामिलामा काँग्रेसले हस्तक्षेप गर्दैनः रामचन्द्र पौडेल
पोखरामा इनारमा डुबेर एक युवकको मृत्यु
निर्वाचन समितिलाई देउवाको निर्देशन– मंसिरभित्र सम्पन्न हुने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउनुस्
शुक्रबारदेखि १४ औं संस्करणको गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी हुने
रुपन्देहीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने टोलीको क्यामेरा चोरी
संसदको पिलो न्यायपालिकामा निस्कियो